Fanaparitahana mp3 - Ikkaro
firosoana >> Fanodinana vilany elektronika sy mekanika >> Mp3 nipoaka
Raha tsy maintsy nomentsika anarana ity fahasimbana ity dia tsy isalasalana fa "Famitahana" izany.
Volana vitsivitsy lasa izay dia hitako teny amin'ny arabe ity mp3 512kb ity. Nisokatra ny masoko ary nihazakazaka naka azy aho toa vola 50 €.
Vaky izy io, saingy azo antoka fa afaka nanararaotra sombintsombiny vitsivitsy tao anatiny. Azoko antoka koa fa tokony hahaliana be ilay izy.
Ary tamin'ity faran'ny herinandro ity dia naka minitra vitsivitsy aho ary nanomboka nanala azy io.
Tamin'ny voalohany dia tsy mora izany satria tsy misy visy ivelany ary natahotra ny handrava azy aho, mandra-panaovako antsy amin'ny valan-javaboary izay tao amin'ny fantson-telefaona ary avy teo dia vitako ny nanokatra ilay fitoeram-plastika.
Ary eto dia azonao atao ny mahita ny zavatra hitako.
Ary manenina mafy aho, tsy afaka manandrana fotsiny aho ampiasao indray ny bokotra sasany sy ny USB. Ary ny bokotra fanindriana dia tsy fantatro, satria saika tsy misy tsimatra hametaka azy io intsony.
Heveriko fa ity no fanapahana mahasosotra indrindra sy mankaleo indrindra vitako sy hitako tamin'ny fiainako.
Raha misy manana hevitra momba ny fomba hanararaotantsika ny sombintsombiny na mila maneho hevitra momba ny fandidiana, ny hevitra rehetra dia horaisina.
31 hevitra momba «Ny ampahan'ny mp3»
18 Jona 2009 amin'ny 3:49 hariva
… Ity bilaogy ity. ny famongorana mp3 dia mitovy amin'ny fametrahana silaka eo afovoany ary avelao izy ho toy ny misy ankehitriny. inona ny zavatra hita manaraka? angamba esory ny fahitalavitra misy vato dia anontanio raha misy azo ampiasaina? - Eny raha mijery ianao, miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra sy telefaona misy fakan-tsary dia ahitanao ireo taratra infrareda - oh ary amin'ny vera fitaratra no ahafahanao manapaka ny lalan-drantsika.
18 Jona 2009 amin'ny 3:51 hariva
ary mihodina xD
18 Jona 2009 amin'ny 4:31 hariva
Raha manana hevitra ianao dia misarika fijery mipoaka eee XD
mahatsiravina indray ...
18 Jona 2009 amin'ny 7:11 hariva
Misy fisintomana satria ny olona eto dia afa-po mahita izay misokatra eo afovoany. Na izany aza, mihena ny boky ... Manantena ny fanapahana penina bika sy ny fanamboarana avy amin'ireo vatan'ny cervatana sy cap cap (bic) aho.
18 Jona 2009 amin'ny 7:12 hariva
Efa nanandrana nampiditra azy io tamin'ny solosaina ve ianao? Angamba ny hany simba dia ny efijery ary mbola azonao ampiasaina ho fahatsiarovana USB na maninona no tsy MP3. Mety ho toa an'i Apple kely tsy misy efijery io.
18 Jona 2009 amin'ny 11:34 hariva
misaotra antsika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra, saika ny olona rehetra, eh
Tsara ny mitsikera ny tenanao, fa ny zavatra tsy itovizany dia ny fampidiranao hafatra marobe sy ny ompa. Na izany na tsy izany ho anao dia tapitra ny fotoako mampalahelo.
Eny efa nanandrana nampifandray azy tamin'ny pc aho, saingy tsy mandeha izany. Araka ny efa nolazain'izy ireo, mandeha amin'ny batery izy io, tsy misy LED, ary ny ambiny no nolazainao sy hitanao.
18 Jona 2009 amin'ny 8:35 hariva
Azon'izy ireo atao ny mandefa anao any aminao mba hitahirizanao tsara azy ao amin'ny · $% &.
18 Jona 2009 amin'ny 11:53 hariva
... fa na izany aza, mirehitra ny efijery
19 Jona 2009 amin'ny 9:11 maraina
512 KB ??
Tsy ho 512 Mb ve izany ???
antsasaky mega m toa kely dia kely ... marina?
20 Jona 2009 amin'ny 4:07 hariva
Manararaotra an'ity jack gossip ity aho ary mazava ho azy ny USB. Efa fantatrao fa amin'ny pin rehetra 4 ananany, ny 2 amin'ny sisiny dia mamindra 5V. Tena ilaina ny manao famoronana amin'ny solosaina;)
23 Jona 2009 amin'ny 8:25 maraina
Avy amin'ity rava ity dia misalasala aho fa misy azo ampiasaina. Matetika dia mpamokatra generika mahazatra izy ireo, any Mexico dia mahazatra ny mahita azy ireo any amin'ny fivarotana import, amin'ny ankapobeny sinoa. Raha liana amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba an'ity karazana mpilalao ity ianao, ity pejy ity: http://www.s1mp3.org/es/
Izy io dia mirakitra antontan-taratasy marobe amin'ireo gadget ireo, raha sendra mahita famantarana misy fiainana ianao dia mety azonao atao ny miasa.
25 Jona 2009 amin'ny 6:52 hariva
Manana iray amin'ireo aho ary maty efa ela be, mirehitra ny efijery, azonao atao ny manandrana manala ilay takelaka miraikitra ao ambadiky ny ldc hanazava azy ary hampiasana azy hanazava lcd izay tsy misy jiro.
13 Jolay 2009 amin'ny 3:35 maraina
tsy afaka nanampy micro USB memory ho an'ny mpampitohy aho
20 Aogositra 2009 amin'ny 1:22 maraina
Ralehilahy, ahy ilay Mp3, hitanao tany Madrid, ahoana raha? Ary vaky ny écran rehefa nianjera tamin'ny moto aho, ary avy eo very.
Azafady mba mifandraisa amiko haka izany ao amin'ny adiresy juliocortazad@gmail.com ary manantena aho fa mbola mety mandeha io, tamin'ny teny 512 Megas fa tsy Kb.
Raha tsy mamaly ahy ianao dia hitaky izany amin'ny fomba ara-dalàna aho, ary manampy fahavoazana noho ny nanaparitako azy.
25 Novambra 2009 amin'ny 4:16 hariva
Ity dia fandraisana anjara tsara, na dia miasa ihany aza izy mba hahazoana ny jack sy ny singa hafa, tiako ny manararaotra ny iray izay manana ny port USB mihintsy ary mivarotra azy ratsy, andao hojerentsika raha miaraka amin'ilay torolàlana azoko atao ny mamerina azy. ;)
8 Janoary 2010 amin'ny 5:46 hariva
Heveriko fa ny efijery mp3 dia ampiasaina amin'ny zavatra maro. Manana mp2 3 aho ary nesorina izy ireo ary mieritreritra aho fa azo atao amin'ny alàlan'ny efijery sy amin'ny usb
31 Janoary 2010 tamin'ny 1:15 maraina
Jereo ireo fitaovana maoderina miha miha kely ary aza manahirana manala zavatra maoderina satria ny zavatra ho hitanao dia zavatra mikraoskaopy. mitovy amin'ny solosaina; Ny motera sy ny mpankafy ihany no azonao ampiasaina, fa avy eo mitovy daholo; ny zavatra madinidinika amin'ireo kely sy mitambatra ireo
20 Febroary 2010 amin'ny 6:35 hariva
Raha te hanana fahafinaretana ianao dia afaka manala fanaraha-maso lavitra sy manova ny fahita matetika amin'ny onja ary afaka manakana ny fambara rehetra amin'ireo fanaraha-maso lavitra, dia mandeha izy io ka tsindrio ny bokotra rehetra ary tsy hisy vokany ny hafa
1 aprily 2010 amin'ny 7:49 hariva
Aza manahirana be loatra amin'ny mp3. Misy zavatra ratsy kokoa, miharihary fa mankarary izy, nefa tsy mandeha. Inona no tadiavinao?
29 Oktobra 2010 amin'ny 4:50 alina
Miarahaba anao amin'ny pejy. Mahafinaritra, aza atsahatra ny mametraka zavatra bebe kokoa namana
5 Janoary 2011 tamin'ny 9:17 maraina
hahaha, aza asiana tasy i Ged satria tsy hahita LED izy. Eo amin'ny sisin'ny fampirantiana izy io, heveriko fa manga io. Misy mpilalao toa manana iray nefa manana tongotra 4 satria mivadika loko 3 izy ireo. Manana iray mitovy amin'izany aho ary tsy nesoriko ny fitaovam-piadiana, ary tsy hoe tsy takatry ny solosainao izany fa mila mamelona ny mp3 ary mamantatra azy ilay solosaina. Ary izy ireo dia 512Megas fa tsy Kb Na dia ao anaty stack aza dia voalaza hoe 512M. Heveriko fa tsy mbola anananao izany dia ampifandraiso ary andraso izy. Fa raha izy no tokony nitarika .. veloma.
ilay iray hafa nandefa adiresy, dia jerena izao http://www.s1mp3.org/es/docs_hwspecs.php#overview Ary raha misy LED, hahaha, ary mivadika milay. Veloma.
3 Febroary 2011 amin'ny 7:26 hariva
… Manao vazivazy fotsiny aho, ny ahy dia mitovy (misy aza ny efijery vaky eo amin'ny lafiny iray ihany hahaha) fa omaly no hitako nanadio vatasarihana misavoritaka ary mihaino azy aho izao hehe.
Ny tena izy dia tsy eo amin'ny seranan-tsambo USB ny ahy, saingy mandeha tsara (tsy azoko atao ny miditra / mivoaka ny hira) ... Ny marina dia tiako ny manala azy ireo handraikitra azy ireo ao anaty CD, satria misy ny sasany tsy navoakan'ny namako mpamoron-kira ...
Ny sarinao dia hanampy ahy be dia be amin'ny fametrahana USB vaovao (hikorontana aho nefa tsy misy clue, na inona na inona hivoaka) Raha misy hevitra momba ny fomba hanaovana azy, antenaiko fa afaka manome tariby amiko ianao toa azonao tsara kokoa momba an'io: P
Avelako ny mailako raha sanatria ny lalitra, arahaba!